Archive du 20190205
Vakivava ireo depiote Feno herisetra i Madagasikara
Tsy an-tanàn-dehibe, tsy ambanivohitra fa mihorohoro ny mponina noho ny fakana an-keriny, ny fanafihana mitam-piadiana, ny faty olona hita mitsirara etsy sy eroa, tahaka ilay tetsy Masay.
Politika ankapoben’ny fanjakana Tsy mazava ny loharanom-bola
Natolotry omaly alatsinainy 04 febroary tetsy amin’ny Antenimieram-pirenena ny politika ankapobeny hitondran’ny fanjakana ny firenena (PGE).
HVM sy MAPAR Miseho masoandro ny gidragidra
Mafampana ny fifandiran’ny HVM sy ny MAPAR amin’izao, raha dinihina amin’ny zava-niseho tato ho ato. Tsikaritra ho matahotra amin’ny mety hanongotana azy amin’ny toerany ireo loholona HVM miisa 21 notendren’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina,
Filoham-pirenena sady mamoaka hevitra no mitsara Jadona izany, hoy Ratsietison
Ohatry ny mihetsiketsika fotsiny ny fitondrana, hoy ny filohan’ny antoko politika FMI Malagasy, Jean Jacques Ratsietison, raha naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny politika ankapoben’ny fitondrana.
Rava ny antenimieram-pirenena Misy kajy maloto ny fifidianana depiote…
Tapitra tanteraka anio talata 5 febroary amin’ny 12 ora alina ny fe-potoam-piasan’ireo solombavambahoaka mandrafitra ny antenimieram-pirenena voafidy nandritra ny fifidianana natao ny 20 desambra 2013.
Sambo mandroba ny harena an-dranomasina Tsy mazava izay tena hevitry ny fitondrana
Amin’ny ankapobeny, tsara ny programa ankapoben’ny fanjakana (PGE) natolotry ny governemanta tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian, raha ny fanehoan-kevitry ny Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tany Tsihombe Masy Goulamaly Marie Jeanne d’Arc tamin’ny fakan-kevitra natao taminy.
Fikambanana FM2TR Hitarika an’ireo klioba hiala amin’ny gaboraraka
Namory an’ireo fileovana mpanao rugby eto an-drenivohitra tetsy Andrefan’Ambohijanahary tamin’ny sabotsy 02 feboary teo ny fikambanana FMT2R “Fikambanan’ny Mpanabe sy ny Tena Tia Rugby” tarihan’ny filoha mpiara-mitantana,
Edito Mipetraka ho tantara
Fitakiana fialana praiminisitra, fitakiana fialana filoham-pirenena, kolikoly, horonantsary sy sary mamoafady, lalàna nolaniana an-terisetra.
Distrikan’Atsimondrano Efa-bolana ny olan’ny rano sy jiro tsy mety voavaha
Saika manao ny tomban’ny fotoam-piasany tamin’ny naha solombavambahoaka azy avy ireo depiote amin’izao fiafaran’ny fotoam-piasan’izy ireo izao.
Petra-bola “Tsinjo Lavitra” Maherin’ny 460 000 ireo mpampiasa azy
Somary taraiky i Madagasikara eo amin`ny sehatra ara-banky. Miroso amin`ny fandraharahana ara-bola (Inclusion financière) ny paositra Malagasy(PTT) ankehitriny ary hataony fanamby noho ny soso-kevitra avy amin`ny vondrona iraisam-pirenen`ny paositra (UPU).
“Société SDOI” Nizara savony ho an’ny traboina sy sahirana
Notanterahina ny zoma 01 febroary 2019 sy ny sabotsy 02 febroary lasa teo ny fanomezana fanampiana ireo traboina sy olona sahirana teto amin’ny faritra Analamanga nataon’ny orinasa na ny “SOCIETE SDOI”,
“La Haute ville” sy ny manodidina Fokontany 9 voasokajy ho faritra mena
Tokantrano 2403 tafo no tsy maintsy miala tanteraka eny amin’ny faritry ny “La haute ville” ka afindra toerana any amin’ny Village Voara Andohatapenaka, any Ambohidratrimo ary eny amin’ny kianja
Antananarivo Renivohitra Tsy ekena intsony ny mivarotra eny amin’ny arabe
Taorian’ny fihaonana teo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny prefektiora ary ny polisy nasionaly manerana ny boriborintany enina amin’ny famahana ny olan’ny fifamoivoizana eto
Angelo, ilay tovolahy kamboty teny Tsimialonjafy Noraisiny omaly ireo fanampiana azy avy amin’ny filoha teo aloha
Tovolahy kely iray nonina teny amin’ny fokontany Tsimialonjafy nisy ilay vato nianjera tamin’ny 19 janoary lasa teo i Angelo.
Andohatapenaka Trano miisa 10 no indray narodana
Trano miisa 10 no indray narodana omaly tetsy Andohatapenaka. Raha araka ny fantatra dia ady tany mbola mandeha eny amin’ny Fitsarana izy io saingy vetivety foana dia nivaly.
Fandraràna ny fanondranan’omby Tsy ampy raha ny didim-panjakana fotsiny
Nisy ny didim-panjakana nivoaka tamin’ny filankevitry ny minisitra mandrara ny fanondranana ny omby.